Programme PROSPERERTetikasa fanatsarana taranak'omby ao anatin'ny Faritra Matsiatra Ambony - Programme PROSPERER Tetikasa fanatsarana taranak'omby ao anatin'ny Faritra Matsiatra Ambony - Programme PROSPERER
Ny Faritra Matsiatra Ambony dia anisan’ireo faritra mandrafitra ny atao hoe Telozoron’ny ronono na «Triangle laitier», izany hoe faritra manana toe-tany sy toetr’andro mety tsara amin’ny fiompiana omby vavy be ronono. Anisany tafiditra indrindra anatin’ireo laharam-pahamehan’ny faritra ny lalam-pihariana ronono.
Ho fampandrosoana izany lalam-pihariana izany, ny Foibem-paritry ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono ao Matsiatra Ambony sy ny Fandaharanasa FANOITRA, dia miara-miasa hanatratrarana tanjona iraisana dia ny fampitomboana ny vokatra ronono eto amin’ny Faritra. Maro ireo dingana efa natao niarahan’ny roa tonta. Teo ny fampiofanana ireo mpiompy mpandraharaha (MER), miompana indrindra amin’ny tekinikam-piompiana, ny fitantanana ara-pahasalamana, ny fambolena vilona, ny lafiny ara-pananahana ary ny fandrafetana kaontim-pamokarana. Tsy mijanona amin’ny fanofanana ihany anefa izany fa arahina fampiharana sy fanjohina eny ifotony ho fanamafisana ny fahaiza-manao.
Noho izay fahitana fa manomboka miharatsy izay ny karazan’omby mamokatra ronono eto amin’ny Faritra dia napetraka ho tanjona ny famerenana indray ny fampanarahana enti-tanana izay niato teo aloha. Nisy àry noho izany ny fampiofanana teknisiana 5 mahakasika ny fampanarahana
Isan’ireo mpiompy nahazo fiofanana sy tohana tamin’ity tetikasa fanatsarana taranak’omby ity Andriamatoa RAMANDIMBISOA Richard na i Sacha. Mponina ao Ambatolahy Lovasoa fokontany Talata Iboaka ao amin’ny kaominina Alakamisy Ambohimaha izy ary efa 15 taona izay no nanaovany ny fiompiana ombivavy be ronono.
Tamin’ny taona 2005, omby vavy norvégien iray no nanombohany. Efa mananika ny 50 ny taranak’io ombivavy io hatramin’izao. Misy ny efa namidy, ary ombivavy 4 taranak’io omby io ireo ombivavy hita amin’ny sary etsy am-pita. 2016 no nahazoany fiofanana momba ny fanatsarana taranaka omby sy fambolena ahitra tamin’ny Ministeran’ny Fambolena, Fiompiana ary ny jono tamin’ny alalan’ny Fandaharanasa FANOITRA.
Raha omby tsara razana, mahatratra hatramin’ny 16 na 20 litatra isan’andro ny ronono azo aminy. Ny an’Andriamatoa Sacha, amin’ny ankapobeny mahatratra 15 litatra ny ronono azo avy amin’ny ombiny isan’andro raha ao anatin’ny 3 volana voalohany nahaterahany, aorian’izay kosa dia efa midina 10 litatra isan’andro.
Mbola malalaka tsara ny tsenan’ny ronono ao Matsiatra Ambony. Ny ROFAMA na ROnono FAritra Matsiatra Ambony no mandray ny ronono rehetra. Eo amin’ny “point de collecte” ao Iboaka Andriamatoa Sacha no manatitra ny ronono noho ny fiaraha-miasan’ny ROFAMA amin’ireo mpanangon- dronono.
Vondrona Koperativa misehatra amin’ny fihariana ronono eo anivon’ny Faritra Matsiatra Ambony ny ROFAMA, ary miara-miasa amin’ny mpiompy miisa 317 ao anatin’ny Distrika 4 ao amin’ny Faritra dia Vohibato, Lalangina, Isandra ary Fianarantsoa renivohitra. Ny ROFAMA noho izany no mpandraharaha ara-barotra mandray ny vokatra rononon’ny mpiompy omby ao amin’ny Faritra Matsiatra Ambony ary manodina izany ho “yaourt” sy fromazy.
2011 no nisokatra ny toeram-pivarotana voalohany, amin’izao fotoana efa 4 ireo toeram-pivarotana tantanin’ny ROFAMA. Tsy mandray ronono sy manodina ary mivarotra vokatra vita amin’ny ronono ihany no asan’ny ROFAMA fa miainga amin’ny fanomezana
fiofanana ara-teknika ireo mpiompy efa miara-miasa aminy ao anatin’ireo distrika 4 ireo ihany koa mba ahazoana antoka amin’ny fahatsaran’ny kalitaon’ny vokatra.
500 litatra isan’andro ny ronono miditra ao amin’ny ROFAMA tamin’iny taona 2019 iny, izany hoe 182548 litatra ny ronono voaangona nandritra ny taona iray.